Kubaluleke kangakanani ukuthi iWeb Design Design For Engine Rankings? - Ukukhathazeka kwe-Expert Semalt
Kunoma yiliphi ibhizinisi eliku-intanethi, ukuthola ukugeleza okuqhubekayo kwamaklayenti ku-inthanethi umqondo oyinhloko ngemuva kokudala iwebhusayithi. Ngokusebenzisa i-Search Engine Optimization (SEO), inkampani ingakwazi ukuvikela ubukhona obuqinile nokubonakalayo ku-inthanethi. Umfanekiso wesithombe ungafinyelela kubantu abaningi njengoba inkampani ifinyelela kumakhasimende amaningi. Ngenxa yalokho, amawebhusayithi amaningi ahlose ukubeka phezulu kuma injini ngamagama athile ayisihluthulelo kuphela ku-niche yawo - eleaf ello duro tank. Impumelelo yale nqubo iyenzeka nge-SEO. Ihlanganisa izici ezifana namagama angukhiye search, backlinking kanye marketing social media viral.
Kusukela ngoJanuwari 2017, i-SEO ishintshile kancane kancane. Ngokwesibonelo, ngaphandle kwamagama angukhiye, i-Google manje igxile kokubaluleka kokuqukethwe, ubuhle bomakhalekhukhwini bokuklama, ukuhambisana kokuqukethwe kanye nezici ze-web design. Ukuze omunye enze i-algorithm ye-SERP ibekwe, kufanele agxile kuphela ekuhlangenwe nakho komsebenzisi phakathi neseshini yokuphequlula. Umzwelo wokuzwa nokucabangela komuntu uma uchofoza isixhumanisi sakho kuthinta isinqumo sabo ngokuthi uthenge kusayithi lakho noma ushiye emphumela wokucinga ohlukile. Ngakho-ke, ukwenza iwebhusayithi ngokulandela izici ezinhle zokuklabhula iwebhu kufanele kube nokuthengiswa kwe-intanethi.
Ukuze umuntu athole ama-rankings amahle, uMphathi weNtuthuko weKhasimende Semalt , Izinkonzo Zedivolumu, u-Alexander Peresunko, uncoma lezi zakhi ezilandelayo:
Ibhizinisi lobuchwepheshe lewebhu
Iwebhusayithi kufanele iphumelele ekukhokheni kwayo nokubamba. Isayithi elihle akumele libe nezinkinga nezimbungulu..Iphakheji lokubamba kufanele libe ne-bandwidth ewanele yokuphendula kahle kanye nesivinini. NgoJanuwari kulo nyaka, i-Google idinga ukuthi amawebhusayithi abe nobungane bamaselula ukuba afake emakhasini we-SERP.
Ukushicilelwa kwezimpawu zokukhohlwa
I-SEO yilezo zonke ngokudala ukubonakala kwegama eliqinile. I-Google inikezela ukuhambisana kokuqukethwe ngokusebenzisa isigaba. Ukukhethwa kwamagama angukhiye kanye nokuchazwa kokuqukethwe kwakho kubonisa ukuthi isikhundla lelokhasi lizovikeleka kuma-SERP. Noma yini oyithumelayo imelela umkhiqizo ozama ukuwenza ugciwane.
Isici sokuhlelwa kwewebhusayithi yinjongo kuphela yokuthuthukiswa kwewebhu. I-Google inikezela injongo yomsebenzisi ngezimo ezinjalo. Umuntu kufanele athambeke lapho evakashela isayithi lakho. Isici esibonakalayo sandisa ukuguqulwa ngokuguqula izivakashi zibe abathengi. Idizayini kufanele inike isivakashi sakho isikhathi esilula futhi sibaqondise ngokuthenga noma ukubhalisa.
Indlela oyifaka ngayo okuqukethwe kanye nezinkinobho ezikhethekile ezifana nemisebenzi ye-Call-To-Action inika kakhulu ekuthengiseni okwenzayo. Ukunethezeka kokuhamba ngokuhamba phambili kusiza kakhulu ukuthi amakhasimende athola kanjani lokho abakufunayo. Ikhasimende akufanele libe nesikhathi esinzima noma uhlangabezane nanoma yikuphi ubunzima lapho uhamba.
Njengomuntu osomabhizinisi, ukuthuthukiswa kwewebhu kungakwazi ukuphazamisa amasu amaningi wokuthengisa we-digital njenge-SEO. Ukuhleleka kokuncenga isivakashi uzizwa kuwebhusayithi yakho kunomthelela omkhulu ukuthi bazokwenza yini noma cha, kanye nezinjini zokusesha, zibeka amakhasi akho wewebhu. Ukuze kube nesethi ethile yamagama angukhiye, ubungane bomakhalekhukhwini, kanye nokuphendula kwe-website, yizici i-Google inikeza isisindo uma kuziwa ekusekeni iwebhusayithi. Ngenxa yalokho, kubalulekile kunoma yisiphi isomabhizinisi efisa ukungena enkundleni ye-intanethi ukucubungula ibhizinisi lobuchwepheshe bokuthuthukiswa kwewebhu. Izingosi ezinhle zinezikhundla eziphezulu kanye nokuncintisana emiceleni yazo.